Diktoor Dufle oo katirsan xildhibaanada aqalka sare oo ka badbaaday qarax lala beegsaday gaarigiisa - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDiktoor Dufle oo katirsan xildhibaanada aqalka sare oo ka badbaaday qarax lala beegsaday gaarigiisa
Diktoor Cismaan Maxamuud oo loo yaqaan (Dufle). [Sawirka: BBC Soomaali]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Diktoor Cismaan Maxamuud oo loo yaqaan (Dufle) oo ah xubin katirsan aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaco ah ka badbaaday isku-day dil ah, sida ay sheegayaan wararku.
Diktoor Dufle ayaa ka badbaaday dilka kadib markii miino dhulka lagu aasay ay ku qaraxday gaarigiisa xilli uu ku sii jeeday xarun caafimaad oo uu ku leeyahay gudaha magaalada Muqdisho.
Dhowr ilaaladiisa kamid ah ayaa ku dhaawacmay weerarka, sida ay sheegeen ilo-wareedyadu.
Dabayaaqadii sanadkii tagay ee 2016-ka, ayaa Dikotoor Dufle loo doortay xubin katirsan aqalka sare ee dalka.
Diktoor Dufle oo kamid ah dhqaatiirta khibrada leh oo aan dalka dibada uga bixin markii uu burburku dhacay, ayaa bishii December 2009-kii ka badbaaday qarax xoogan oo isbiimayn ahaa oo ka dhacay huteel Shaamow, kaasoo ay ku dhinteen ilaa afar wasiir oo dowladda federaalka Soomaaliya katirsanaa iyo ku dhawaad 30 dhalinyaro ah oo ka qalinjabisay kulliyada caafimaadka ee jaamacada Banaadir oo Diktoorku asaasay.
November 15, 2016 Maxkamad Masar ah oo tuurtay xukunka toogashada ah ee madaxweynihii hore awooda laga tuuray Maxamed Mursi
Puntland oo dib u dhigtay dilka maxaabiis Al-Shabaab ah kuwaasoo lagu xukumay dil toogasho ah
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa dib u dhigtay dilka maxaabiis Al-Shabaab ah kuwaasoo horey loogu xukumay dil toogasho, sida uu sheegay sarkaal. Sarkaal dhanka ammaanka ah oo katirsan Puntland, kaasoo codsaday in aan magaciisa la sheegin, [...]
Labo dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn Mareykanku ka geystay Jubbada Hoose
Muqdisho-(Puntland Mirror) Labo katirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka geystay Soomaaliya. Duqeynta ayaa Jimcadii ka dhacday deegaanka Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose, sida taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) ay bayaan ku [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Diyaarado dagaal oo aan la aqoon cida leh ayaa duqeeyay deegaanka Buqo ee gobolka Bari halkaas oo maleeshiyada ISIS ay ku leedahay saldhigyo, ilo-wareedyo katirsan Puntland ayaa u sheegay warsidaha Puntland Mirror. Duqaynta [...]